कति कमाउँछन् यौनकर्मी महिलाले ? - Everest Dainik - News from Nepal
कति कमाउँछन् यौनकर्मी महिलाले ?
काठमाडौं । राजधानीमा यौनकर्मी महिलाले कति कमाउँछन् होला ? धेरै मानिसको मनमा उठ्ने प्रश्न । एक अध्ययनका अनुसार यौनकर्ममा लागेका महिलाको कमाइमा भने एकरुपमा नभएको देखिएको छ ।
कमाइमा निकै ठूलो फरक पाइएको अध्ययनले बताएको छ । कुनै महिलाले एकै राजको हजारौं कमाउँछिन भने कसैले सातामा मुस्किलले एक हजार कमाउने देखिएको छ ।
केही समयअघि प्रमिला (नाम परिर्वतन) को मोबाइलमा एक अपरिचित नम्बरबाट फोन आयो । उक्त फोन उनका पूर्व परिचित आइएनजिओका एक जागिरेको रहेछ । प्रमिलालाई पहिलेदेखि नै वाच गरिरहेको बताउँदै उनले एक रातको १५ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरे । उनले ती व्यक्तिबाट पाएको प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार गरिन् । यसले के देखाउँछ भने ग्राहकको रोजाइमा परे भने एकै पटकमा राम्रो कमाइ पनि हुन्छ ।
याे पनि पढ्नुस प्रहरीलाई केटी मिलाइदिने होटलवाला पक्राउ
यद्यपि सबैको कमाइ प्रमिलाको जस्तो कुस्त नै छ भन्ने छैन । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये कतिपयले हप्तामा १ हजार रुपैयाँ समेत कमाउन हम्मेहम्मे पर्ने बताएका थिए ।
त्यसैगरी १ हजार रुपैयाँसम्म कमाइ हुन्छ भन्ने ७ प्रतिशत थिए भने १ देखि २ हजार रुपैयाँसम्म कमाइ हुने १५ दशमलव २ प्रतिशत थिए । २ देखि ३ हजार रुपैयाँ कमाइ हुने १५ दशमलव ८ प्रतिशत, ३ देखि ४ हजार रुपैयाँ कमाइ हुनेहरूको संख्या ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
व्यक्तिगत कमाइका हिसाबले सामान्य देखिए पनि यो व्यापार भने करोडौं रुपैयाँ बराबरको छ । ग्राहकले तिर्ने सबै पैसा सीधै यौनकर्मीकहाँ पनि पुग्दैन । अन्य क्षेत्रमा झैं यहाँ पनि ठूलो सिन्डिकेट खडा भएको प्रहरीको दाबी छ ।
ट्याग्स: याैनकर्मी महिला